Dowlada Kenya oo kala hadleya Soomaliya sidii xayiraada looga qadi khadka loo dhoofin jiray dalkaasi – The Voice of Northeastern Kenya
Dowlada Kenya oo kala hadleya Soomaliya sidii xayiraada looga qadi khadka loo dhoofin jiray dalkaasi
Dowlada dalka ayaa waxay bilawday wadahadal ay la galeyso dowlada soomaaliya oo la xiriira sidii soomaaliya ay dalkan Kenya ooga qaadi lahayd xayiraada ay galisay khaadkii dalkaasi loo dhoofin jiray.
Afhayenka dowlada Eric Kiraithe oo shalay warfidiyenka la hadlaayay ayaa sheegay in wasaarada arrimaha dibada ay faraha kula jirto sidii soomaliya ay kala hadli lahaayen hakinta jadka.
Dowlada somaliya ayaa horantii isbuucan waxay ku dhawaaqen in si ku meel gaar ah loo joojiyay khadkii laga dhoofin jiray gudaha dalkani Kenya islamarkaana tagi jiray qeybo katirsan Soomaaliya.
Mr Kiraithe ayaa sheegay in hadii lagu guuldaresto in sida ugu dhaqsiyaha badan in loo xaaliyo arrintan, Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta uu markaas soo faragashan doono arrintan si uu u la hadlo dhigiisa Soomaaliya Xaasan Sheick Maxamuud.
Qorshaahan ay dowlada ku shaacisay in dhigooda Soomaliya ay kala hadli doonto joojinta jaadka ayaa daba socday kadib markii qaar kamid ah beeraleyda khadka ay cabasha ka mujiyen talaabada ay xukuumada Soomaliya qaaday.
Dhanka kale Afhayeenka dowlada ayaa hoosta ka xariiqay in gavanaha Countiga Meru uusan wax lug ah ku lahayn talaabada khadka ay soomaliya ku jooisay wallow uu carabka ku dhuftay in aysan wanagsanayn hogaamiye maamul goboleed in uu wadan kale tago islamarkaana kala soo wada xaajoodo shaqo la doonayo in ay qabato wasaarada arrimaha dibada.
Peter Munya oo goor sii horeysay sheegey in naftiisa ay Qatar kujirto maadama lagu eedeynayo in joojinta khadka Soomaaliya uu sabab u ahaa ayuu afhayeenka dowlada waxa u sheegay in Mas’uulkaasi la siin doono ilaalo kufilan oo amaankiisa suga.
← Jubilee oo maanta dahfureyso xisbi cusub halka Cord-na ay u dabaal dagayaan 10 sano guuradii kasoo wareegatay markii la as aasay
Dhiiga DNA-da ee wariye goor sii horeysay ku geeriyooday Kilifi oo loo qaaday Konfur Africa →